Gbasara Anyị - Rapid Scaffolding (Engineering) Co., Ltd.
Otutu Scaffolding (Engineering) Co., Ltd.bụ a na-eduga ụlọ ọrụ na scaffolding ụlọ ọrụ na China. Kemgbe e guzobere ya na 2003, RS etolitewo iwere nsogbu ndị ọzọ ma ọganiihu ọ na-aga n'ihu na-abịa site na iji ndị ahịa ya na ndị ọrụ ya kpọrọ ihe na itinye aka na ọrụ, arụmọrụ na ogo.
Anyị abụghị naanị ndị ọkachamara na-emebe na n'ichepụta nile nke ígwè scaffoldings na formwork usoro, kamakwa anyị na-etinye aka ịbụ onye ọkachamara na-emepe emepe aluminum scaffoldings. Ngwaahịa anyị gụnyere Ringlock (Allround), Cuplock, Kwikstage, Haky, Frames, Props, wdg.
Companylọ ọrụ anyị nwere nnukwu ebe dị ihe dị ka 100km site na ọdụ ụgbọ mmiri Shanghai, nke dị naanị nkeji 30 site na ụgbọ oloko na Shanghai site na ụgbọ oloko na elekere otu elekere na ụgbọ ala. Onodi ebe-ekpuchi banyere 30,000m2, na nkwakọba banyere 10,000m2.
Rapid Scaffolding na-anya isi na-enwe otu ndị nwere nke ukwuu ma zuo oke ruru eru injinia na teknuzu ọkachamara. Dị ka dị iche iche na-arịọ si anyị ahịa, anyị nwere ike na-enye a dum nso nke scaffolding na formwork emebe.Anyị na-enye ọrụ nkwụsị maka ọrụ ọ bụla.
Anyị nwere nnukwu ndị otu ọrụ mmepụta ihe, nke na-ejigide ọkwa dị elu nke ọkwa ọ bụla nke mmepe ahụ. Ndi otu oru n’ile n’ile ndi nlekota oru anya nke ubochi. A na-eji usoro ịgbado ọkụ na usoro ịgbado ọkụ robot. Anyị ịzụlite ọhụrụ ígwè plank akpụ igwe, nke na-enwekwu plank mmepụta ikike, banyere1,000pcskwa ụbọchị. Site na ndị ọrụ nwere ahụmahụ, igwe dị elu na njikwa dị mma, ikike anyị gbasara25,000 tọn kwa afọ.
Anyị nwere usoro njikwa njikwa zuru oke, nke na-ekwe nkwa ogo dị elu nke ngwaahịa anyị ma mesie usoro niile ike n'ihi oge. Otutu Scaffolding (Engineering) Co., Ltd. enwetara nzere ntozu ISO9001, CE, ISO14001, OHSAS18001. A na-anwale sistemụ anyị niile iji kwado ANSI A10.8, AS / NZS1576.3, JIS ọkọlọtọ JIS.